निजामतीमा पुण्य असफल « Pahilo News
प्रकाशित मिति : 25 June, 2016 8:28 am
काठमाडौं । निर्वाचनमा दुई तिहाई जिल्ला र विभागीय समितिमा पहिलो शक्तिका रुपमा जित हासिल गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन । २१ सदस्यीय आधिकारिक ट्रेड युनियनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षसहित ११ सिट पाएको संगठनले असार १ र २ गते बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकले नेतृत्व चयन गर्न नसकी टुंगिएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सहमतिका लागि पहल गर्ने तर सहमति हुन नसकेपछि बहुमतले निर्णय गर्नका लागि बाटो खुल्ला नगरेका कारण संगठनले नेतृत्व चयन गर्न नसकेको बताइन्छ । असार १ र २ गतेको बैठकमा अध्यक्ष आउ“दै नआउने र आए पनि १० मिनेट बस्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष आफ्नै नाममा सहमति हुनुपर्ने अडान राख्ने र त्यसो हुन नसकेपछि मोवाइलमा कानमा लगाएर हेलो हेलो गर्दै बाहिर निस्किने र त्यहीँबाट वेपत्ता हुने गरेपछि सहभागी हैरान भए । २ गते बिहानदेखि बैठक राखियो । केन्द्रीय सदस्यहरु सबै जम्मा भए तर उनी दिनभर आएनन् । राती मात्र बैठकमा झुल्किए । र, बैठक स्थगित गरी हिँड्न खोज्दा आक्रोशित केन्द्रीय सदस्यहरुले बैठक टुंगोमा नपु¥याई स्थगित गर्न पाइँदैन भन्दै होहल्ला गरे । तर, अध्यक्ष ढकालनिकट सचिव गंगा सुनुवारले कुर्सी उठाएर बैठक स्थगितको विरोध गर्ने केन्दीय सदस्यहरुमाथि प्रहार गर्ने क्रममा ढकालको हातमा का“टीले कोतरेको थियो । ढकाललाई के चाहियो र ? त्यसपछि तिललाई पहाड बनाएर उनले बैठक नै बोलाएका छैनन् ।
ढकाल समूहका सुनुवारले कुटाइ खाएको भन्दै सामाजिक संजालमा सेल्फी खिचेर हाले भने भवानी दाहाल, केदार देवकोटाहरुले भिडियो पनि खिचेका छन् । उनीहरुले केन्द्रीय सदस्य युवराज महतमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन् । तर, उनीहरुले खिचेको भिडियोमा सुनुवारले कुर्सी प्रहार गर्दा घाउ भएको स्पष्ट देखिन्छ । पूर्वयोजनाअनुसार नै नाटकीय रुपमा कुटपिट गर्ने नियत राखेर ढकालहरु आएको तर आफू संयमित भएका कारण त्यो दिन केही हुन नपाएको अर्को पक्षको दावी छ । विश्वेन्द्र पासवानले संसद्मा कुर्सी फालेको शैलमिा सुनुवार आफैैले कुर्सी प्रहार गर्ने क्रममा का“टीले कोतरेर पाखुरामा घाउ भएको कुरालाई अर्को पक्षले कुटेको प्रचार गरेर संगठनकै बेइज्जत गर्ने काम भएको बैठकमा सहभागी बताउँछन् । सहमतिबाट नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार बहुमतका आधारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनमा पठाउनुपर्ने दायित्वबाट ढकाल विमुख भएका छन् ।
अध्यक्षका लागि किन योग्य हुन सकेनन् ढकाल ?
संगठनमा ४० महिना नेतृत्व गरेका अध्यक्ष ढकालको कामकारबाही अपारदर्शी भएकाले उनी संगठनमा भारी अल्पमतमा छन् । अध्यक्ष भएपछि निजामती सेवा ऐन विपरीत उनले गृह मन्त्रालयमै दरबन्दी राखेको आरोप छ । निजामती सेवा ऐनको दफा २४ (घ१) अनुसार बढुवा भएका कर्मचारीहरुको समायोजन भई पदस्थापन भएको कार्यालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उनी गएनन् । काजमै गृहमन्त्रालयमा बसे । र, ऐन विपरीत उनको मात्र पदस्थापन भएको एक बर्षमै गृहमै दरबन्दी कायम गरिएको थियो । जबकि २४(घ१) को बढुवा समायोजनपछि पदस्थापन भएका कुनै पनि कर्मचारीको २ बर्ष नपुगी दरबन्दी संशोधन भएको छैन । यो कुरा तमाम कर्मचारीलाई पाच्य हुन सकेन । उनी एक जनाको हकमा मात्र ऐन मिचेर एक बर्षमै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गृहमै दरबन्दी कायम गरिएको थियो । सरकारले प्रत्येक ट्रेड युनियनका ५ पदाधिकारीलाई ट्रेड युनियन काजको सुविधा दिएको थियो तर उनले अध्यक्षको ४० महिने कार्यकालमा एक दिन पनि ट्रेड युनियन काज लिएनन् । टे«ेड युनियन काजमा बस्ने निर्णय गरे तर आफैंले त्यो निर्णय पालना गरेनन् । कारण गृहको आकर्षक महाशाखाबाट देश विदेशमा जान पाइन्छ । जिल्ला भ्रमणमा जा“दा गृह र संगठन दुवैतिरबाट सुविधा लिएको कुराले पनि उनी आलोचित भएका हुन् ।
अध्यक्ष ढकाल संगठनको कार्य समितिभित्र स्पष्ट अल्पमतमा रहेका छन् । उनले जितेपछि सबैलाई समेटेर जानुपर्नेमा सा“घुरो कोटरी बनाउ“दै हिंडे, समेट्न सकेनन् । सानो कोटरीमा रमाउने र संगठनमा सबैस“ग छलफल गर्ने भन्दा पनि गृह मन्त्रालयको विभागीय कार्यसमितिमा बसी संगठन चलाउने प्रयास गरेकाले पनि उनी संगठनमा अल्पमतमा पर्न गएका हुन् ।
७५ जिल्लामध्ये ५० र ४२ विभागमध्ये ३० विभाग गरी ८० कार्यसमिति संगठनले जित्दा अध्यक्ष ढकाल ०५१ देखि कार्यरत रहेको गृह मन्त्रालयमा संगठन पराजित भयो । टे«ेड युनियन चुनावअघि जुन जुन जिल्लामा ढकाल गए, त्यही जिल्लामा संगठनले चुनाव हारेको तथ्य संगठनले राखेको छ । उनी कैलालीमा ५ दिन बसे, त्यहा“ संगठन हा¥यो ।
ढकालले संगठनलाई निर्विवाद ढंगले संचालन गर्नुपर्नेमा सहकर्मीहरुको समाचार माओवादी निकट अनलाइन र पत्रिकामा लेखाउने गरेको आरोप छ । केदार देवकोटा जिताउ अभियान, नितेश लम्साल, सार्वजनिक प्रशासन दबाब समूह जस्ता फेक आइडी खोल्न लगाएर तिनै माओवादी मिडियामा आएका समाचार ट्याग गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोप पनि ढकालमाथि छ । ढकालले संगठनको अध्यक्ष हु“दासम्म मोटरसाइकल चलाउ“दै आएका थिए । मापसेमा सवारी अनुमतिपत्रमा ५ वटा प्वाल परेपछि लाइसेन्स रद्द जस्तै भएपछि गृहमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुस“ग रुवाबासी गरेर गाडी लिएर हिंड्न थाले, जुन उनको पदीय हैसियतले पाउने सुविधा होइन ।
गृह र संगठनबाट दोहोरो सुविधा लिएका उनले जिल्लामा जा“दा विकासे अड्डाका लेखाका कर्मचारीस“ग ५ लिटरको तेलको कुपनसमेत मागी पेट्रोल पम्पबाट पैसा लिने गरेको आरोप छ । लमही, तनहु“ लगायत लगायतका जिल्लामा उनले तेलको कुपन लिएर एमाले निकट ब्यवसायीले संचालन गरेका पम्पमा बिक्री गरेको गुनासो सम्बन्धित जिल्लाका पार्टी कार्यालयमै पुगेको खुलासा भएको छ ।